तिमीहरू राजाको रूपमा शासन गर्न खोज्थ्यौ, र आज तिमीहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा त्याग्न अझै बाँकी छ; तिमीहरू अझै पनि राजाको रूपमा शासन गर्न, स्वर्गहरूलाई नियन्त्रण गर्न र पृथ्वीलाई समर्थन गर्न चाहन्छौ। अब, यो प्रश्नलाई विचार गर: के तिमीसँग त्यस्ता योग्यताहरू छन्? के तिमी पूर्ण रूपमा चेतनाहीन भइरहेका छैनौं र? के तिमी जे खोज्छौ र जुन कुरामा ध्यान दिन्छौ त्यसमा समर्पित छौ? तिमीमा सामान्य मानवता पनि छैन—के यो दयनीय हैन? यसैले, आज म केवल विजय गर्ने, गवाही दिने, तिम्रो क्षमता सुधार गर्ने, र सिद्ध हुने मार्गमा प्रवेश गर्ने कुरा गर्दछु, र अरू केही कुरा गर्दिनँ। केही मानिसहरू अमिश्रित सत्यताबाट थकित छन्, र जब तिनीहरूले सामान्य मानवताको र मानिसहरूको क्षमता सुधारका यी सबै कुरा देख्छन्, तिनीहरू अनिच्छुक हुन्छन्। तिनीहरू जसले सत्यलाई प्रेम गर्दैनन् तिनीहरूलाई सिद्ध बनाउन सजिलो हुँदैन। जबसम्म तिमीहरू आज प्रवेश गर्छौ, र परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार, एक—एक चरण गर्दै कार्य गर्छौ, के तिमी हटाइन सक्छौ? मुख्य भूमि चीनमा परमेश्‍वरले यति धेरै काम—यति ठूलो परिमाणको काम—गरिसक्नुभएपछि, र उहाँले यति धेरै शब्दहरू बोल्नुभएपछि, के उहाँले आधा बाटोमा छोड्नुहुन्थ्यो? के उहाँले मानिसहरूलाई अतल कुण्डमा लैजानुहुन्थ्यो? आज, महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तिमीहरूले मानिसको तत्वलाई थाहा पाउनुपर्दछ, र तिमीहरूले कुन कुरामा प्रवेश गर्नुपर्दछ भनेर जान्नुपर्दछ; तिमीले जीवनमा प्रवेश गर्ने, र स्वभावमा हुने परिवर्तन, वास्तवमा कसरी जितिने, र कसरी पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरको आज्ञा पालन गर्ने, कसरी परमेश्‍वरको अन्तिम गवाही दिने, र कसरी मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुने भन्ने कुराहरूको बारेमा बातचित गर्नैपर्छ। तिमीले यी कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्दछ, र जुन वास्तविक वा महत्त्वपूर्ण छैन त्यो पहिले अलग राख्नुपर्छ र बेवास्ता गर्नुपर्दछ। आज, तिमीले कसरी जितिने, र जितिएपछि मानिसहरूले कसरी आफूलाई संचालन गर्छन् त्यो बारेमा सचेत हुनुपर्दछ। सायद तिमीलाई जितिएको छ भन्छौं होला, तर के तिमी मृत्युसम्म आज्ञा पालन गर्न सक्छौ? कुनै सम्भावनाहरू भए पनि वा नभए पनि तिमी अन्त्यसम्म पछि लाग्नुपर्दछ, वातावरण जस्तै भए पनि तिमीले परमेश्‍वरप्रतिको विश्‍वास गुमाउनुहुँदैन। आखिरीमा, तिमीले गवाहीका दुई पक्ष प्राप्त गर्नुपर्छः अय्यूवको गवाही—मृत्युसम्म आज्ञाकारिता; र पत्रुसको गवाही—परमेश्‍वरप्रतिको सर्वोच्च प्रेम। एउटा पक्षमा, तिमी अय्यूवजस्तै हुनुपर्छः तिनले सबै भौतिक सम्पत्तिहरू गुमाए, र शरीर पीडाले ढाकियो, तापनि तिनले यहोवाको नाउँ त्यागेनन्। यो अय्यूवको गवाही थियो। पत्रुस मृत्युसम्म परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न सक्षम थिए। जब तिनलाई क्रूसमा टाँगियो र तिनले मृत्युको सामना गरे, त्यस बेला पनि तिनले परमेश्‍वरलाई प्रेम गरिरहे; तिनले आफ्नै सम्भावनाहरूको बारेमा सोचेनन् वा सुन्दर आशा वा असाधारण विचारहरूको पछि लागेनन्, तिनले केवल परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न र परमेश्‍वरका सबै प्रबन्धहरूको पालन गर्न खोजे। तिमीले गवाही दिनेबारे विचार गर्नुभन्दा अघि, जितिएर सिद्ध बनाइएपछिको कुनै व्यक्ति बन्नु भन्दा पहिले, तिमीले यस्तो स्तर प्राप्त गर्नुपर्छ। आज, यदि मानिसहरूले साँच्चै आफ्नो सार र दर्जा थाहा पाउथ्यो भने, के उनीहरूले अझै पनि सम्भावना र आशाहरू खोज्ने थिए? तिमीले जान्नुपर्ने कुरा यो होः परमेश्‍वरले मलाई सिद्ध बनाउनु भए पनि वा नबनाउनु भए पनि, म परमेश्‍वरको पछि लाग्नुपर्छ; अहिले उहाँले गर्नुहुने सबै कुरा असल छन् र ती मेरो खातिर गरिएको हुन्, र यसैले कि हाम्रो स्वभाव परिवर्तन हुन सकोस् र हामी आफैलाई शैतानको प्रभावबाट छुटाउन सकौं, हामी आफैलाई फोहोरको भूमिमा जन्मन दिने अनुमति दिन सकौं, र आफैलाई अशुद्धताबाट मुक्त गर्न सकौं, फोहोर र शैतानको प्रभावलाई फाल्न सकौं, त्यसलाई पछाडि छोड्न सकौं। अवश्य, तिमीबाट चाहिने यही नै हो, तर परमेश्‍वरका निम्ति यो विजय मात्र हो, यसैले कि मानिसहरूले आज्ञापालन गर्ने सङ्कल्प गरून् र परमेश्‍वरका सबै योजनाहरूको अधीनमा बस्न सकून्। यही तरिकाले, सबै कुराहरू सम्पन्न हुनेछन्। आज, अधिकांश व्यक्तिहरू अघि नै जितिसकिएका छन्, तर तिनीहरूभित्र अझै पनि विद्रोही र अनाज्ञाकारी धेरै कुरा छन्। मानिसहरूको वास्तविक कद अझै पनि धेरै सानो छ, र आशाहरू र सम्भावनाहरू हुन्छन् भने मात्र तिनीहरू शक्तिले पूर्ण हुन सक्नेछन्; आशा र सम्भावनाहरूको अभावमा, तिनीहरू नकारात्मक बन्छन्, र परमेश्‍वरलाई छोड्ने विषयमा विचार गर्दछन्। यसबाहेक, मानिसहरूमा सामान्य मानवता जियाउन खोजी गर्ने कुनै ठुलो चाहना छैन। यो अस्वीकार्य छ। यसैले, मैले अझै पनि विजयको कुरा गर्नैपर्छ। वास्तवमा, विजय भएकै समयमा सिद्धता पनि हुन्छ: जब तिमी जितिन्छौ, तब सिद्ध बन्नुको पहिलो प्रभावहरू पनि प्राप्त गरिन्छ। जहाँ जितिने र सिद्ध बनाइने कुरा बीच भिन्नता हुन्छ, त्यो पनि मानिसहरूमा भएको परिवर्तनको तहअनुसार हुन्छ। सिद्ध बनाइनुको पहिलो चरण जितिनु हो, अनि त्यसको अर्थ तिनीहरू पूर्णरूपमा सिद्ध भइसकेका छन् भन्ने होइन, न त यो तिनीहरू पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिएका छन् भन्ने प्रमाण नै हो। मानिसहरू जितिएपछि, तिनीहरूको स्वभावमा केही परिवर्तनहरू हुन्छन्, तर त्यस्ता परिवर्तनहरू परमेश्‍वरबाट पूर्ण रूपमा प्राप्त भएका व्यक्तिहरूमा कम हुन्छन्। आज, जे गरिन्छ त्यो मानिसहरूलाई सिद्ध बनाउने—तिनीहरूलाई जित्ने प्रारम्भिक काम हो—अनि यदि तिमीले विजय हुने कामलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौं भने, तिमीसँग सिद्ध हुने र परमेश्‍वरद्वारा पूर्ण रूपले जितिने कुनै माध्यम हुनेछैन। तिमीले दण्ड र न्यायको थोरै वचनहरू प्राप्त गर्नेछौ, तर ती तिम्रो हृदय पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न असमर्थ हुनेछन्। यसैले तिमी ती मध्येका एक हुनेछौ, जो हटाइनेछन्; त्यो टेबलमाथिको भव्य भोज हेर्नु, तर नखानु भन्दा त्यत्ति फरक हुँदैन। के यो तिम्रो लागि दुःखद परिदृश्य होइन र? अनि त्यसकारण तिमीले परिवर्तनहरू खोज्नुपर्दछ: चाहे त्यो जित्ने होस् वा सिद्ध पारिने, ती दुवै तिमीभित्र परिवर्तनहरू भएका छन् कि छैनन्, र तिमी आज्ञाकारी छौ कि छैनौ भन्ने कुरासित सम्बन्धित हुन्छन्, अनि त्यसले तिमी परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने कुरा निश्चित गर्दछ। यो जान कि “जितिनु” र “सिद्ध बनाइनु” परिवर्तन र आज्ञाकारिताको मात्रामा साथै परमेश्‍वरप्रति तिम्रो प्रेम कति शुद्ध छ भन्ने कुरामा आधारित हुन्छन्। आज हामीलाई चाहिने कुरा के हो भने तिमी पूर्ण रूपमा सिद्ध हुन सक्छौ, तर सुरुमा तिमीलाई जितिनुपर्छ—तिमीमा परमेश्‍वरको दण्ड र न्यायको पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्दछ, उहाँलाई पछ्याउने विश्‍वास हुनुपर्दछ, र परिवर्तन खोज्ने र ज्ञानको खोजी गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्दछ। तब मात्र तिमी त्यो व्यक्ति बन्नेछौ जो सिद्ध बनाइन खोजिन्छ। तिमीहरूले बुझ्नुपर्दछ, कि सिद्ध हुने क्रममा तिमी जितिनेछौ, र जितिने क्रममा तिमी सिद्ध बनाइनेछौ। आज, तिमी सिद्ध बनाइन वा तिम्रो बाहिरी मानवतामा परिवर्तन गर्न र तिम्रो क्षमतामा सुधार गर्न खोजी गर्न सक्छौ, तर प्रमुख महत्त्वको कुरा यो हो कि आज परमेश्‍वरले गर्नुहुने सबै कुराको अर्थ छ र त्यो लाभदायक छ भनी बुझ्न सक्नेछौ: यसले तिमी फोहोर देशमा जन्मेको व्यक्तिलाई फोहोरबाट उम्कन र ती फाल्न सक्षम बनाउँछ, यसले तिमीलाई शैतानको प्रभावलाई जित्न, र शैतानको अन्धकारको प्रभाव पछाडी छोडीराख्न सक्षम बनाउँछ। यी कुराहरूमा ध्यान दिँदा, तिमी फोहोरको यो देशमा सुरक्षित हुनेछौ। आखिरमा, तिमीलाई के गवाही दिन आग्रह गरिन्छ? तिमी फोहोरको देशमा जन्मेका छौ, तर तिमी पवित्र बन्न सक्षम छौ, र शैतानको क्षेत्रमा जिउनका निम्ति फेरि कहिल्यै फोहोरद्वारा दुषित हुँदैनौ, तर आफैलाई शैतानको प्रभावबाट छुटाउछौ, शैतानको कब्जा वा उत्पीडनमा पर्दैनौ, सर्वशक्तिमानका हातहरूमुनि जिउछौ। शैतानसितको लडाइँमा पाएको विजयको गवाही र प्रमाण यही नै हो। तिमी शैतानलाई त्याग्न सक्षम हुन्छौ, तिमी आफ्नो जियाइमा शैतानी स्वभावहरू प्रकट गर्दैनौ, बरु परमेश्‍वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले माग गर्नुभएअनुसार जिउनेछौः सामान्य मानवता, सामान्य ज्ञान, सामान्य अन्तर्दृष्टि, परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने सामान्य संकल्प, र परमेश्‍वरप्रतिको बफादारीता। यो परमेश्‍वरको एक प्राणीले वहन गर्ने गवाही हो। तिमी भन्छौ, “हामी फोहोरको देशमा जन्मिएका छौं, तर परमेश्‍वरको सुरक्षाको कारण, उहाँको नेतृत्वको कारण, र उहाँले हामीलाई जित्नुभएको कारण, हामीले आफैलाई शैतानको प्रभावदेखि छुटाएका छौं। आज हामीले आज्ञापालन गर्न सक्नु पनि परमेश्‍वरले हामीलाई जित्नुभएको प्रभाव हो, अनि यो हामी असल भएकोले, वा हामीले स्वाभाविक रूपले परमेश्‍वरलाई प्रेम गरेकोले होइन। परमेश्‍वरले हामीलाई चुन्नुभएकोले र हामीलाई पूर्वनियुक्त गर्नुभएकोले आज हामी जितिएका छौं, र उहाँको गवाही दिन सक्छौं, उहाँको सेवा गर्न सक्छौं; यसरी, उहाँले हामीलाई चुन्नुभएको र रक्षा गर्नुभएकोले पनि, हामी शैतानको क्षेत्रबाट बचाइएको र छुटाइएका छौं, अनि फोहोर पछाडि छोड्न र ठूलो रातो अजिङ्गरको देशमा शुद्ध हुन सक्छौं।” यसबाहेक, तिमी बाहिरी रूपमा जसरी जिउँछौ त्यसले तिमीमा सामान्य मानवता छ भन्ने देखाउँछ, तिमीले जे भन्छौं त्यसको अर्थ हुन्छ, र तिमी सामान्य व्यक्तिको स्वरूप जियाउँछौं। जब अरूले तिमीलाई हेर्छन्, तिमीले उनीहरूलाई यसो भन्न लाउनुहुँदैन: “के यो ठूलो रातो अजिङ्गरको स्वरूप होइन?” दिदी—बहिनीहरूको आचरण एउटी बहिनीलाई नसुहाउने छ; दाजुभाइहरूको आचरण एक भाइलाई नसुहाउने छ; अनि तिमीमा सन्तहरूको शिष्टता थोरै पनि छैन। तब मानिसहरूले भन्नेछन्, “यो अचम्म मान्नु पर्ने कुरा होइन, कि परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई मोआबको सन्तान भन्नुभयो, उहाँ पूर्ण रूपमा सही हुनुहुन्थ्यो।” यदि मानिसहरूले तिमीहरूलाई हेर्छन् र भन्दछन्, “यद्यपि परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई मोआबको सन्तान भन्नुभए पनि, तिमीहरू जसरी जिइरहेका छौ त्यसले तिमीहरूले शैतानको प्रभावलाई पछाडी छोडी राखेका छौ भन्ने प्रमाणित गर्दछ; यद्यपि ती कुराहरू तिमीहरूभित्र छन्, तिमीहरू त्यसप्रति आफ्नो पिठिउँ फर्काउन सक्छौ, यसले तिमीहरू पूर्ण रूपमा जितिएका छौ भन्ने देखाउँदछ,” तिमीहरू जो जितिएका र बचाइएका छौ, तिमीहरू भन्नेछौ, “यो साँचो हो, कि हामी मोआबका सन्तानहरू हौं, तर हामी परमेश्‍वरद्वारा मुक्त भएका छौं, र विगतमा मोआबका सन्तानहरू त्यागिएका र श्रापित थिए, र इस्राएलका मानिसहरूद्वारा अन्यजातिहरूको माझमा निर्वासित थिए, आज परमेश्‍वरले हामीलाई मुक्त गर्नुभएको छ। यो सत्य हो कि हामी सबै मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा भ्रष्ट छौं—यो परमेश्‍वरले घोषणा गर्नुभएको थियो, यो तथ्य हो, र यो सबैले इन्कार गर्न नसक्ने कुरा हो। तर आज हामी त्यो प्रभावबाट उम्केका छौं। हामी हाम्रा पुर्खालाई घृणा गर्दछौं, हामी हाम्रा पुर्खातर्फ पिठिउँ फर्काउन, त्यो पूर्ण रूपले त्याग्न र परमेश्‍वरको इच्छाबमोजिम काम गर्दै र उहाँले हामीबाट गर्नुभएका मागहरू प्राप्त गर्दै र परमेश्‍वरको इच्छाको सन्तुष्टि हासिल गर्दै, परमेश्‍वरका सबै व्यवस्थाहरू पालन गर्दछौं। मोआबले परमेश्‍वरलाई धोका दियो, उसले परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार कार्य गरेन, र परमेश्‍वरले उसलाई घृणा गर्नुभयो। तर हामीले परमेश्‍वरको हृदयको ख्याल राख्नुपर्दछ, र आज, हामी परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्दछौं, त्यसैले हामी परमेश्‍वरलाई धोका दिन सक्दैनौं, र हाम्रो पुरानो पुर्खालाई त्याग्नुपर्छ!” पहिले मैले ठूलो रातो अजिङ्गरलाई त्याग गर्ने कुरा गरें, र आज, यो मुख्य रूपले मानिसको पुरानो पुर्खालाई त्याग गर्ने कुरा हो। यो मानिसहरूको विजयको एउटा गवाही हो, र तिमी आज जसरी प्रवेश गरे पनि, यस क्षेत्रमा तिम्रो साक्षीमा कमी हुनुहुँदैन।
मानिसहरूको क्षमता धेरै दुर्बल छ, तिनीहरूमा सामान्य मानवताको धेरै कमी छ, तिनीहरूका प्रतिक्रियाहरू एकदमै सुस्त, एकदमै अल्छी छन्, शैतानको भ्रष्टताले तिनीहरूलाई बोधो र मन्द बुद्धि बनाएको छ, र यद्यपि तिनीहरू एक वा दुई वर्षमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन सक्दैनन्, तिनीहरूसँग सहकार्य गर्ने संकल्प हुनुपर्दछ। यो शैतानको सामु एउटा गवाही हो पनि भन्न सकिन्छ। आजको गवाही वर्तमान विजयको कामद्वारा प्राप्त गरेको प्रभाव हो, साथै भविष्यका अनुयायीहरूका लागि नमुना र आदर्श हो। भविष्यमा, यो सबै राष्ट्रहरूमा फैलिनेछ; चीनमा गरिएको काम सबै देशहरूमा फैलिनेछ। मोआबका सन्तानहरू विश्‍वका सबैभन्दा न्यूनतम संख्या भएकामानिसहरू हुन्। केही व्यक्तिहरू सोध्छन्, “के हामका सन्तानहरू सबैभन्दा न्यूनतम संख्याका छैनन्?” ठूलो रातो अजिङ्गरको सन्तान र हामका सन्तानहरू विभिन्न प्रतिनिधिमूलक महत्त्वका छन्, र हामका सन्‍तानहरू एउटा फरक विषय हुन्ः तिनीहरू जति नै श्रापित भए पनि, तिनीहरू अझै पनि नोआका सन्‍तान हुन्; यसै बीचमा, मोआबको उत्पत्ति भने शुद्ध थिएनः मोआब व्यभिचारबाट आएको थियो, र यसै कुरामा भिन्नता छ। यद्यपि ती दुवै श्रापित थिए, तापनि तिनीहरूको ओहोदा एउटै थिएनन्, र यसकारण मोआबका सन्तानहरू सबैभन्दा न्यूनतम संख्या भएका मानिसहरू हुन्—र सबैभन्दा न्यूनतम संख्या भएकामानिसहरूलाई जित्नुभन्दा बढी विश्‍वसनीय तथ्य अरू हुन सक्दैन। आखिरी दिनहरूको कामले सबै नियमहरू तोड्दछ, अनि तिमी श्रापित वा आशिष पाएको व्यक्ति, जो भए पनि, जबसम्म तिमीले मेरो काममा सहायता गर्छौ र आजको विजयको कामका निम्ति उपयोगी हुन्छौ, तब तिमी मोआबको सन्तान वा ठूलो रातो अजिङ्गरको सन्तान, जो भए पनि, जबसम्म तिमी कामको यस चरणमा परमेश्‍वरको एउटा प्राणीको कर्तव्य पूरा गर्छौ र तिमीले गर्न सक्ने सक्दो गर्छौ, तब पाउनु पर्ने प्रभाव प्राप्त हुनेछ। तिमी ठूलो रातो अजिङ्गरको सन्तान हौं, र तिमी मोआबको सन्तान हौं; समग्रमा भन्ने हो भने, जो मासु र रगतका हुन् तिनीहरू सबै परमेश्‍वरका प्राणीहरू हुन् र तिनीहरू सृष्टिकर्ताद्वारा बनाइएका थिए। तिमी परमेश्‍वरको प्राणी हौं, तिमीसँग कुनै विकल्प हुनुहुँदैन, र यो तिम्रो कर्तव्य हो। अवश्य, आज सृष्टिकर्ताको काम सम्पूर्ण ब्रह्माण्डप्रति निर्देशित छ। तिमी जुन वंशबाट आएको सन्तान भए पनि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तिमी परमेश्‍वरको एउटा प्राणी हौं, तिमीहरू—जो मोआबको सन्तान हौं—परमेश्‍वरका प्राणीहरूको भाग हौं, फरक यति मात्र छ कि तिम्रो मूल्य कम छ। आज, परमेश्‍वरको काम सबै प्राणीहरूको माझमा र सारा ब्रह्माण्डमा गरिने भएकोले, सृष्टिकर्ता उहाँको काम गर्नका निम्ति कुनै पनि मानिसहरू, विषयहरू वा थोकहरू चुन्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तिमी कुन वंशबाट आएका थियौ भन्ने कुरा उहाँले परवाह गर्नुहुन्न; जबसम्म तिमी उहाँको प्राणीहरू मध्ये एउटा प्राणी रहन्छौ, र जबसम्म तिमी उहाँको काम—विजय र गवाहीको काम—का निम्ति फाइदाजनक हुन्छौ, उहाँले तिमीभित्र कुनै संकोचबिना उहाँको काम पूरा गर्नुहुनेछ। यसले मानिसहरूका परम्परागत धारणाहरूलाई चकनाचूर पार्छ, जुनचाहिँ यही हुन् कि परमेश्‍वरले अन्यजातिहरूका बीचमा कहिल्यै पनि काम गर्नुहुनेछैन, विशेष गरी तिनीहरूका माझमा जो श्रापित र तुच्छ छन्; किनकि जो श्रापित छन्, तिनीहरूबाट भविष्यमा आउने सबै पुस्ताहरू पनि सदाका लागि श्रापित हुनेछन्, जसको निम्ति मुक्ति पाउने कुनै पनि सम्भावना हुँदैन; परमेश्‍वर कहिल्यै पनि अन्यजातिहरूको देशमा ओर्लेर काम गर्नुहुने छैन, र उहाँले फोहोरको देशमा कहिल्यै पनि खुट्टा टेक्नु हुनेछैन, किनकि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। आखिरी दिनहरूमा परमेश्‍वरको कामद्वारा यी सबै धारणाहरू चकनाचूर पारिएका छन्। यो जान कि परमेश्‍वर सबै प्राणीहरूका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, स्वर्गहरू, पृथ्वी र सबै थोकहरूमाथि उहाँको अधिकार छ, अनि उहाँ इस्राएलका मानिसहरूका परमेश्‍वर मात्र हुनुहुन्न। त्यसैले, चीनमा भएको यो कामको ठूलो महत्त्व छ, र के यो सबै देशहरूमा फैलिएको छैन र? भविष्यको ठूलो गवाही चीनमा मात्र सीमित हुनेछैन; यदि परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई जित्नु मात्र सक्नुभयो भने, के भूतात्माहरू विश्‍वस्त हुन सक्छन्? तिनीहरू विजय हुनु के हो, वा परमेश्‍वरको महान् शक्ति के हो बुझ्दैनन्, अनि जब सारा ब्रह्माण्डका परमेश्‍वरका चुनिएका मानिसहरूले अन्तिम प्रभावहरू देख्दछन्, तब सबै प्राणीहरू जितिनेछन्। मोआबका सन्तानहरू भन्दा बढी कोही पनि पिछडिएको वा भ्रष्ट छैन। मात्र यदि ती मानिसहरू जो धेरै भ्रष्ट छन्, जसले परमेश्‍वरलाई स्वीकार गर्दैनन् वा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी विश्‍वास गर्दैनन्, जित्न सकियो भने, र तिनीहरूका मुखले परमेश्‍वरलाई स्वीकार गर्छन्, उहाँको प्रशंसा गर्छन् र उहाँलाई प्रेम गर्न सक्छन् भने, के यो विजयको गवाही हुनेछैन र। यद्यपि तिमीहरू पत्रुस होइनौ, तिमीहरू पत्रुसको स्वरूपअनुसार जिउछौ, तिमीहरू पत्रुसको र अय्यूवको गवाही धारण गर्न सक्छौ, र यो सबैभन्दा ठूलो गवाही हो। अन्त्यमा तिमी यसो भन्नेछौः “हामी इस्राएलीहरू होइनौं, तर मोआबको त्यागिएका सन्तानहरू हौं, हामी पत्रुस होइनौं, जसको क्षमता प्राप्त गर्न हामी असक्षम छौं, न त अय्यूव हौं, अनि हामी परमेश्‍वरको लागि दुःख भोग्ने र आफैलाई परमेश्‍वरमा समर्पण गर्ने पावलको संकल्पसित तुलना गर्न सक्दैनौं, र हामी धेरै पछौटे छौं, र यसैले हामी परमेश्‍वरको आशिषको आनन्द लिन अयोग्य छौं। आज पनि परमेश्‍वरले हामीलाई माथि उठाउनुभएको छ; त्यसकारण हामीले परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्दछ, र हामी अपर्याप्त क्षमता वा योग्यताका भए पनि, हामी परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न तयार छौं—हामीसँग यो संकल्प छ। हामी मोआबका सन्तानहरू हौं, र हामी श्रापित थियौं। यो परमेश्‍वरद्वारा घोषणा गरिएको थियो, र हामी यसलाई परिवर्तन गर्न असक्षम छौं, तर हाम्रो जीवनशैली र हाम्रो ज्ञान परिवर्तन हुन सक्दछ, र हामी परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न कटिबद्ध छौं।” जब तिमीसँग यो संकल्प हुन्छ, तब त्यसले तिमीले विजय प्राप्त गरिरहेको गवाही दिएका छौ भन्ने प्रमाणित गर्दछ।